Ukuphunyezwa kweNkqubo yoMntu yeZantsi / uKhuseleko lwaBasebenzi iLone (A10002) | Izisombululo ze-OMG
Ukuphunyezwa kweNkqubo yoMntu yeZantsi / uKhuseleko loMsebenzi oMnye (i-A10002)
Umsebenzi ohamba yedwa ngumntu owenza umsebenzi owenziwa yedwa kwabanye abasebenzi ngaphandle kokujonga okanye ukujonga ngqo. Abasebenzi abanjalo banokuchaphazeleka emngciphekweni kuba kungekho namnye ukubanceda. Ubunzulu bomcimbi bunokuqondwa kwezi zibakala. Ngokwe-International data Corporate (IDC) i-1.3 yezigidigidi zabantu basebenza kwindawo ekude kwihlabathi kwaye i-53 yezigidi ngabasebenzi abodwa e-USA, Canada nase Yurophu kuphela. Oku kuphakamisa inkxalabo yezokhuseleko kwaba basebenzi, imiba eqhelekileyo iyahamba okanye iyawa, uhambo, ukungqubana kwezithuthi, imililo yombane, kunye nokuvezwa kwemichiza. Ngokwengxelo yombutho wezizwe ngezizwe, abantu be-6300 bafa ngenxa yezehlo okanye izifo ezinxulumene nomsebenzi kunye neziganeko zomsebenzi ezizizigidi ze-317 zenzeka rhoqo ngonyaka.
Ukujonga ezi zibakala ukuba sibona kwimibutho, ubukhulu becala basebenzisa indlela yezandla kunokuya kwisisombululo sanamhla. Okokuqala, kweli nqaku, siza kuthetha ngeendlela ezisetyenziswayo ngoku, okwesibini isixhobo sokuvavanya umngcipheko umbutho ekufuneka usisebenzise ukuqonda inqanaba lomngcipheko onxulumene nomsebenzi othile kunokuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi bebodwa ngokwamkela itekhnoloji yamva nje ukuze ekugqibeleni Cebisa ngetekhnoloji yale mihla enceda umbutho ukuphelisa le micimbi.
Okwangoku, inkampani iqinisekisa njani ukhuseleko lomsebenzi omnye:
Izixhobo Ezikhuselayo (i-PPEs): Imibutho okwangoku ibonelela ngesixhobo sokhuseleko (PPEs) kubasebenzi abodwa abancedisayo emsebenzini. Umzekelo, ukuba umsebenzi ohamba yedwa wenza umsebenzi onxulumene nombane, umbutho uya kubanikeza iiglasi zokhuseleko, izihlangu zobuso, iminqwazi, izihlangu zokhuseleko, iigloves zokufaka, kunye nezinye izixhobo zokhuseleko.
Ukutyelelwa rhoqo nokunxibelelana rhoqo: Ukuba umntu oyedwa usebenza kwindawo ekude, umbutho ubandwendwela rhoqo ukubona ukuba usebenza njani. Ngokufanayo, unxibelelwano lwemihla ngemihla lwenziwa ngerediyo kunye neefowuni.
Iialarm ezingxamisekileyo: Ibekwe kwindawo yombutho, umsebenzi yedwa unokuyenza le nto xa esiva nayiphi na ingozi.
IiNdawo ezingezozamazwi: Enye indlela eqhelekileyo kukubeka imiqondiso kwiindawo ezinobungozi. Umzekelo, xa umgangatho umanzi, kukho uphawu olubekwa apho. Nangona kunjalo, ukusebenzisa kakhulu imiqondiso kukhokelela kwiingozi apho ukusebenza kukodwa kungaqondi intsingiselo yeempawu. Yiyo loo nto umbutho kufuneka ubanike ulwazi olufanelekileyo malunga nemiqondiso.
Inkqubo yesilumkiso esizenzekelayo: Yinkqubo ezenzekelayo ethumela izilumkiso xa kwenzeka umlilo okanye uqhushumbo. Sesinye sezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswa phantse yiyo yonke intlangano.
Uhlalutyo lwePET: Sisixhobo sovavanyo lomngcipheko esinceda ukuqonda umngcipheko onxulumene nomsebenzi wabasebenzi abodwa. Uhlalutyo lwe-PET lunamacandelo amathathu, aBantu, okusiNgqongileyo kunye nomsebenzi.
abantu: Umbutho kufuneka ubone imbali yobundlobongela, ubundlongondlongo okanye imisebenzi yolwaphulo-mthetho yomntu oyedwa. Ngaba ikhona imiba yezempilo? Bafanele babone namava abo okusebenza bodwa.
Indawo esingqongileyo: Kwelo nhlangano kufuneka ujonge ukuba ngowuphi umngcipheko onxulunyaniswa nokusingqongileyo. Ngaba ukusebenza kwefowuni apho abasebenzi bebodwa baya khona, ngaba basebenza ukuphakama kunye neminye imiba enxulumene nokusingqongileyo.
Umsebenzi: yintoni umngcipheko onxulumene nomsebenzi wabasebenzi abodwa njengokuphatha imali, ukunyanzelisa umthetho, ukusebenza ngeekhemikhali okanye omnye umsebenzi onzima.
Emva kokwenza olu hlalutyo inkampani iya kwisisombululo sanamhlanje esichazwe ngezantsi. IHelp sisisombululo esipheleleyo seepakeji esinokunceda umbutho ukujongana nemicimbi ejongene nabodwa abasebenzi.
Itekhnoloji yokuqinisekisa ukuKhuseleka kwabaSebenzela bebodwa:
Ukuba sibona isisebenzi esikhethekileyo singafuni mntu oza kubalawula, bafuna ukonwabela inkululeko yabo ngokusebenza bodwa kwaye kwangaxeshanye, bafuna ukhuseleko kunye nokhuseleko. Ukujonga kule meko yetekhnoloji sisisombululo kuphela esingcono kuneendlela ezisetyenziswayo ngoku. Isisombululo se-one-point sinikezelwa yinkqubo ye-ihelp-man eyeyona nto iphantsi ye-3G GPS tracker isixhobo. Esi sisixhobo esincinci ukuze abasebenzi abazodwa bangaziva bengekacaphuki ngelixa bephethe isixhobo. Ikwanayo i-tracker ye-GPS ethumela indawo ngokuqhubekayo kumbutho. Inenkqubo yokubona into echanekileyo ngokuchanekileyo xa umntu ewa, ithumela umyalezo kunye nendawo kwindawo yombutho ukuba ithathe amanyathelo kwangoko anokuthi abusindise ubomi bomsebenzi omnye. Ngaphandle kwalonto kukho iqhosha kwifowuni xa umntu esiva nayiphi na ingozi, unokucofa iqhosha kwaye athumele indawo kulawulo. Unxibelelwano lwalo mbini lwenza ukuba ukwazi ukuthetha nabasebenzi bebodwa xa ufuna kwaye ube nolwazi oluqhubekayo.
3415 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje